အိပ်မက်ဆိပ်ကမ်း: life in Dining -1
life in Dining -1
~ ဒီလို မြို့ပြဘ၀က အဆင့်မြင့်ပါတယ် ~ နေထိုင်စားသောက်ဖို့အတွက် အားလုံး အဆင်ပြေ ~
ယန္တရားဆန်ဆန် ခုတ်မောင်းနေသော နေ့တဒူဝ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွင်း ညနေစာစားခြင်း (dining time)သည် သမရိုးကျဆန်လွန်းသည်။ ရွေးချယ်ထားသော အစားအစာ၊ နေရာနှင့် အတူစားသုံးမည့်သူများသည် ညနေစာစားခြင်းအတွက် အရေးအပါဆုံး ဖြစ်မည်ထင်သည်။ ငယ်စဉ်က ညနေစာ စားခြင်းအကြောင်း တွေးလေ့တွေးထ သိပ်မရှိခဲ့။ မည်သည့် အစားအစာကိုမှ စားမည်ဟုလည်း ကန့်သတ်ချက်မထား။ မီးဖိုခန်းနှင့် ထမင်းစားခန်းသည် အစားအစာချက်ပြုတ်ရန်နှင့် စားသုံးရန်နေရာတစ်ခုသာ ဖြစ်သည့်အကြောင်းမျှသာ တွေးသည်။ ထမင်းစားခန်းအတွင်းတွင် မဟုတ်ဘဲ အခြားနေရာများတွင် စားသုံးရန်အတွက်လည်း ၀န်မလေးတတ်။ မေမေ မည်သည့်ညစာ ချက်ထားမည်နည်းဟုလည်း စိတ်ကူးမယဉ်။ အခြေအနေနှင့် အချိန်အခါတို့သည် ပြောင်းလဲတတ်သည်ဟုဆိုလျှင် ယခုတော့ dining time နှင့် dining room များအကြောင်း တခုတ်တရ တွေးတတ်လာသည်။ ညစာစားသုံးမည့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ပိုမိုခံစားတတ်လာသည်။ အတူတကွ ညစာ စားသုံးခဲ့သူများကို အမှတ်ရတတ်လာသည်။
ငယ်ငယ်တုန်းက မြင်မှတ်ခဲ့ဖူးသော မီးဖိုခန်းများနှင့် ထမင်းစားခန်းများသည် တစ်သီးတစ်သန့်ဆန်လွန်းမည် ထင်သည်။ အထူးသဖြင့် ကျေးလက်ဆန်သော၊ မြေနေရာ ပေါများသော ဒေသများတွင် မီးဖိုခန်းနှင့် ထမင်းစားခန်းများသည် တစ်ခန်းတစ်ဆောင် ထားလေ့ ရှိခဲ့မည်ထင်သည်။ နှစ်ချို့အောင် သိုလှောင်မည့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူ ချက်ပြုတ်ရာမှ ထွက်ရှိမည့် မီးခိုးများ၏ဒဏ်မှ ကင်းဝေးရန် တသီးတသန့်ထားခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်မည်။ ထို အဆောင်အတွင်းတွင် မိခင် (သို့မဟုတ်) အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့် သူတို့၏ သမီးများသည် ဆူဆူညံညံ ချက်ပြုတ်ကောင်း ချက်ပြုတ်နေလိမ့်မည်။ တစ်ဖက်ခြံသို့ အကြောင်းကိစ္စထူးငယ်ကို လှမ်း၍လည်း အော်ပြောသံများလည်း ထွက်ပေါ်ကောင်း ထွက်လာပေလိမ့်မည်။ ထမင်းစားရန် နေရာ ကွက်လပ်တစ်ခု အနီးတွင်လည်း အိမ်မွေး တိရစ္ဆာန်တစ်ချို့ ဥဒဟို သွားလာနေမည်။ နေလှမ်းရန်၊ သိမ်းထုပ်ရန် ရာသီစာများလည်း ပြန့်ကျဲကောင်း ပြန့်ကျဲနေလိမ့်မည်။ အနည်းငယ် လူနေထူထပ်သော မြို့ငယ်များ နှင့် မြေနေရာကျဉ်းသော အိမ်လေးများအတွင်းတွင်တော့ မီးဖိုဆောင်၊ ထမင်းစားခန်းနှင့် ဧည့်ခန်းလေးများသည် တစ်ခန်းချင်းဆီ ဆက်လျက်သော်လည်းကောင်း၊ ဟင်းလင်းခွင်သည် ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့် အတားအဆီးမရှိ ဆက်စပ်၍သော်လည်းကောင်း တွဲဆက်လျက် ရှိနေပေလိမ့်မည်။ ည ည ဆိုလျှင် ထိုအခန်းလေး အတွင်းတွင် မိသားစုဝင်ချည်း စကားလက်ဆုံလည်း ကျလိမ့်မည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအကြောင်းလည်း ပါမည်။ မိသားစု အတွင်းရေးများလည်း ပါမည်။ ထမင်းစားခန်းလေး အတွင်းတွင် စကားဝိုင်းလေးလည်း စည်ပါမည်။ အတင်းအဖျင်းတစ်ချို့လည်း မြည်ပါမည်။
"မီးဖိုခန်းများနှင့် ထမင်းစားခန်းများသည် တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းဆီ၏ အကြိုက်၊ အလေ့အထနှင့် မတူညီသော လူမျိုးများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးစံများ ထင်ဟပ်နေသည့် နေရာတစ်ခု ဖြစ်သည်" ဟုဆိုလျှင် အချို့ လူနေမှုဘ၀များတွင်တော့ ထမင်းစားခန်းလေးများ အတွင်းတွင် ဘားကောင်တာလေးများ ထားရှိရသည်ကို နှစ်ခြိုက်ပေလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအား ထိုထမင်းစားခန်းလေးများသို့ ဖိတ်၍ ပါတီပွဲလေးများလည်း ဖန်တီးကောင်း ဖန်တီးပေလိမ့်မည်။ ၀ိုင်အရသာအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလည်း ပြောဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ လိုက်၍မမှီတော့သော နည်းပညာ တိုးတက်မှုများ အကြောင်းလည်း ပါပါမည်။ ရင်ဖွင့်သံ အမျိုးမျိုးလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ အလွမ်းအဆွေး ဇာတ်လမ်းလေးများလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။ မည်သည့်လူမျိုး၊ မည်သည့်ယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ်တွင်မဆို ထမင်းစားခန်းလေးများသည် မိသားစုစုံညီတွေ့ဆုံနိုင်သည့် နေရာလေးတစ်ခု၊ လူမှုဆက်သွယ်ရေးကျွန်းလေးတစ်ခု ဖြစ်မည်မှာ အမှန်ပင်။
လူတို့၏ စွဲလန်းနှစ်သက်မှုများအပေါ် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ကောက်ချက်ချရန် ခက်ခဲလွန်းပါမည်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့လည်း ခမ်းနားသည်၊ ခေတ်မီသည်၊ ပြီးပြည့်စုံလွန်းသည်ဟု ထင်မှတ်မိသော မီးဖိုခန်းလေးနှင့် ထမင်းစားခန်းလေးကို မေမေနှင့် ညီမလေးအတွက် တောင့်တပါသည်။ ထူးထွေဆန်းပြားလာသော မီးဖိုချောင်သုံး ကိရိယာလေးများကို ညီမလေးက နှစ်သက်တတ်လွန်းသောကြောင့်လည်း ဖြစ်မည်။ သို့သော် သေချာ ဆန်းစစ် တွေးတောမိပြန်လျှင်လည်း ထူးထူးကဲကဲ ဆန္ဒမဖြစ်ပေါ်မိ။ ခမ်းနားပြည့်စုံလွန်းသည် ဆိုခြင်းထက် နွေးထွေးသော၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်သော ဟင်းလင်းခွင်လေးဖြစ်ဖို့သာ တောင့်တမိတော့သည်။ လေ၀င်လေထွက်နှင့် အလင်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရသော အခန်းလေးဖြစ်လျှင် ကျေနပ်ပါသည်။ သဘာဝအလင်းအပြင် တစ်ခါတစ်ရံ ညပိုင်း အသုံးပြုချိန်တွင် ပိုမိုအဆင်ပြေစေရန် top cabinet အောက်တွင် မီးလေးတစ်ပွင့်လောက် ရှိနေလျှင်တော့ ပိုကောင်းပါမည်။ ညှော်တတ်သော အစားအစာများ ချက်ပြုတ်စဉ်မှာတော့ overhead hood လေးရှိစေချင်သည်။ မေမေ ချက်ရင်းပြုတ်ရင်း ဆွမ်းတော်တင်ရန်၊ ပြန်စွန့်ရန်နှင့် အခြား အချိန်မှတ်၍ ချက်ပြုတ်မည့် အစားအစာများအတွက် အချိန်ကြည့်ရန် နာရီလေး တစ်လုံးလောက်တော့ မီးဖိုခန်းထဲတွင် ချိတ်ဆွဲပေးလိုသည်။ နံရံများကိုတော့ တတ်နိုင်သ၍ ချောမွတ်နေစေချင်သည်။ ချေးညှော်များ လွယ်လင့်တကူ မကပ်စေချင်။ ကြမ်းခင်းများကိုတော့ ဖြစ်နိုင်လျှင် သစ်သားနှင့်နွယ်သော finishing တစ်မျိုးမျိုးကိုသာ သုံးချင်သည်။ အေးစက်စက် ကြမ်းခင်းများအပေါ် ရေရှည်ချက်ပြုတ်ခြင်းသည် အသက်အရွယ်ရပြီ ဖြစ်သောသူများအတွက် သင့်တော်မည်မထင်။ လက်ဆေးကန်လေးများမှာ ရေအသုံးပြုရင်း ရေများ မဖိတ်စင်အောင်တော့ သတိထားရမည်ထင်သည်။ မီးဖိုခန်းလေးအတွင်းသို့ water supply သွင်းလျှင်လည်း ရေပူလိုင်းတစ်ခုကို မဖြစ်မနေ ထည့်ပေးချင်သည်။ ဆောင်းတွင်းတွင် ရေကိုင်တာကြာလျှင် မေမေ လက်ကိုက်သည်ဟု မကြာခဏဆိုတတ်သည်လေ။ ထို့အပြင် မီးဖိုချောင်သုံး စာအုပ်တစ်ချို့၊ အထူးသဖြင့် ဆေးမြီးတိုလေးများနှင့် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန် စာအုပ်တစ်ချို့ကို ထားရန် နေရာလေးတစ်ခုတော့ ပေးချင်သည်။ ချက်ရင်းပြုတ်ရင်း ဧည့်သည်လာလျှင် ချက်ချင်းသိစေရန် အိမ်ရှေ့ဝန်းလေးကို မြင်ရသော နေရာလေးတော့ မဖြစ်မနေ ရွေးရမည်။
ထမင်းစားခန်းတွင်တော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ရင်းနှီးခဲ့သော စားပွဲဝိုင်းလေးကို လေးထောင့်စားပွဲများထက် ပိုမိုတောင့်တသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့လည်း တွေးမိသည်။ ဖေဖေသည် ထမင်းစား စားပွဲလေးကို လေးထောင့်စားပွဲမရွေးပဲ စားပွဲဝိုင်းလေးအဖြစ် ရွေးခဲ့ခြင်းသည် အိမ်ထောင်ဦးစီးမို့ ထိပ်ဆုံးတစ်နေရာမှာ ထိုင်မည်ဆိုခြင်းထက် မိသားစု လက်ရေတပြင်တည်း စားသောက်ရန်၊ မိသားစု နွေးနွေးထွေးထွေး ၀ိုင်းဝိုင်းဝန်းဝန်း ရှိစေချင်သောကြောင့် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဧည့်သည်လာလျှင်လည်း ထူးထူးထွေထွေ နေရာပေးရန်မလိုပဲ ၀ိုင်းထိုင်နိုင်သောကြောင့်လည်း ဖြစ်မည်။ သီးသီးသန့်သန့် ချက်ပြုတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပဲ စားရင်းသောက်ရင်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် နေရာလွတ်လေး အပိုရှိလျှင်တော့ ပိုကောင်းမည်ထင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတော့လည်း အပြင်လူများနှင့် တိုက်ရိုက်မတွေ့ဆုံနိုင်သော ထမင်းစားခန်းလေးကို တောင့်တမိသည်။
အချို့ မိသားစုများ၏ ထမင်းစားခန်းလေးများအတွင်းတွင်တော့ ဖျော်ဖြေရေး ရုပ်ဝတ္ထုများလည်း ပါဝင်ကောင်း ပါဝင်ပေလိမ့်မည်။ ရှေးရိုးဆန်သော လူကြီးသူမတစ်ချို့တော့ စားသောက်ချိန်တွင် အခြား အာရုံလွင့်ပျံ့မှုများ မဖြစ်စေလိုသောအတွက် ဖျော်ဖြေရေး ရုပ်ဝတ္ထုများကို ထမင်းစားခန်း အတွင်းသို့ ခေါ်သွင်းလာခြင်းမျိုး နှစ်သက်မည်မထင်။ ခမ်းနားသော မီးဆိုင်းကြီးများနှင့်အတူ ရေတံခွန်လေးများ၊ ငါးကန်လေးများ အစရှိသည်ဖြင့် ထပ်၍ထပ်၍ ထည့်သွင်း လာစေလိုသောသူများလည်း ရှိမည်။ အချို့ကလည်း စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော အလင်း အတိုးအလျော့ အမှိန်အဖျော့လေးများဖြင့် romantic dining room လေးများကိုမှ တောင့်တကောင်း တောင့်တမည်။ အချို့ကလည်း ထွေလီကာလီမထား ရိုးရှင်းသော dining room လေး လိုလားမည်။ မည်သို့ဆိုစေ ထမင်းစားခန်းနှင့် မီးဖိုခန်းလေးများ အတွင်းတွင် နွေးထွေးသော ခံစားမှုတစ်မျိုးတော့ ရှိနေပေမည်။ သို့ဆိုလျှင် ထမင်းစားခန်းလေးများနှင့် မီးဖိုခန်းလေးများအတွက် လိုအပ်မှုသည် ခေတ်မီခမ်းနားခြင်း ဂုဏ်ပုဒ်များထက် နွေးထွေးသော မိသားစုသံယောဇဉ်ဟု ကောက်ချက်ချလိုက်ရမည်လား။ မည်သည့် ဟင်းလင်းခွင်အတွက်မဆို သင့်လျော်သော ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှုများနှင့် နည်းပညာများ လိုအပ်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်လည်း ဖန်တီး၍မရ၊ ဖြည့်ဆည်း၍ မပေးနိုင်သော လိုအပ်မှုများ ရှိနေဦးပေမည်။
အကယ်၍များ မီးဖိုခန်းလေးများနှင့် ထမင်းစားခန်းလေးများကို ဒီဇိုင်းလုပ်ဖြစ်လျှင် ကိုယ့်မိသားစုအတွက် တွေးနေမိသလို အခြားသူများအတွက်လည်း တွေးပေးလိုသည်။ အခြားသူများသည်လည်း မိမိတွေးသလို တွေးကြမည်ဟု ယုံကြည်မိသည်။ ထို ဟင်းလင်ခွင်လေးများအား မည်သည့်ခံစားမှု၊ မည်သည့်ပုံစံဖြင့် ဖန်တီး၍ နေထိုင်မည်ဆိုခြင်းထက် မိသားစုနွေးထွေးမှုသာ အရေးအကြီးဆုံးဟုဆိုလျှင် ဒီဇိုင်းဆိုသော ဝေါဟာရအတွက် ဟာသသက်သက်များ ဖြစ်လေမည်လား။ မိမိ မိသားစုတွင်ပင် အတိအကျ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခြင်းအတွက် ထိုစိတ်ကူးသည် စိတ်ကူးသက်သက်အဖြစ်သာ ရှိလျှင်လည်း ရှိသွားမည် ထင်သည်။
အတွေးများသည် လွင့်လွင့်ပျံ့ပျံ့ရှိလွန်းသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လှမ်းကြည့်မိသည်။ Fast food များ၊ Cafeteria များ၊ Food court များ၊ Restaurant အမျိုးမျိုးသည် လက်ညိုးထိုးမလွဲ ရွေးချယ်နိုင်ရန် စောင့်ကြိုနေကြောင်းသာ မြင်နေရသည်။ နေထိုင်နေမိသည့် မြို့လေးကိုယ်နှိုက်က ရေမြေမတူသော နေရာဒေသအသီးသီးမှ အစားအသောက်အမျိုးမျိုးကို ခံစားသူစိတ်ကြိုက် ၀န်ဆောင်မှုပေးရန် အသင့်ဖြစ်နေသောကြောင့်လည်း ဖြစ်မည်။ "Good Friends, Good Food, Good Times." ဟု ဆိုကြပါသည်။ အစားအသောက်အပေါ် မက်မက်မောမော မခုံမင်မိသော်လည်း အကြောင်းတိုက်ဆိုင်သော မိတ်ဆွေများနှင့် မိဘဆွေမျိုးများကိုတော့ အစားကောင်းတစ်ခုစားမိလျှင် သတိရမိသည်။ သို့သော်လည်း good friends & good food (သို့မဟုတ်) good food & good time ဟု နှစ်ခုမျှ တိုက်ဆိုင်လျှင်ပင် busy lifestyle များနှင့် နေသားကျနေသော မြို့ပြတွင် ကံကောင်းပြီဟု ဆိုနိုင်မည် ထင်သည်။
"မီးဖိုခန်းတစ်ခုသည် အိမ်တစ်အိမ်၏ အသည်းနှလုံးဖြစ်သည်" ဆိုသောစကားကို လက်ခံနေဆဲလားဟု မြို့ကလေးကိုမေးလျှင် "လက်ခံနေဆဲဖြစ်ကြောင်း" မြို့ကလေးက ပြန်ဖြေပါလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာတင် အသစ်အသစ်သော ဆိုင်များသည် နေရာအနှံ့အပြားတွင် တိုးပွားနေဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း မြို့ကလေးလည်း သိပါမည်။ အဆင့်မြင့်လာသော လူမှုဘ၀တွင် မီးဖိုခန်းများနှင့် ထမင်းစားခန်းများသည် ခမ်းနားမှုအတွက် ပြယုဂ်တစ်ခုသာ ဖြစ်လာနေခဲ့သည်လား။ dining time သည် outgoing eating များအဖြစ်သို့ ရွှေ့လျားလေခဲ့သည်လား။ dining culture တို့သည် အချိန်တို့နှင့်အတူ ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်လား။ မြို့ကလေးကတော့ ထိုမေးခွန်းများကို မဖြေဆိုတော့ပဲ ဆိတ်ဆိတ်နေတော့မည်လား။
အတွေးများနှင့်အတူ နွေးထွေးခဲ့ဖူးသော အိမ်ကလေးကို လှမ်းမြင်ကြည့်လိုက်သည်။ အေးစက်နေသော ညစာများသည် နွေးထွေးချိုမြစွာ။
၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁
စကားချပ် - ၁ ။....။
Life in dining ဟု တွေးမိသည်။ သို့သော်လည်း ဘ၀တစ်သက်တာတွင် ပတ်သက်မှု အနည်းဆုံးနေရာလေးသည်လည်း ထိုဟင်းလင်းခွင်လေးသာ ဖြစ်မည် ထင်သည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်က အိမ်သို့ မကြာခဏလာလေ့ရှိခဲ့သော၊ အမေကလည်း အလွန်ချစ်သော ဆရာမတစ်ဦးနှင့် စကားလက်ဆုံကျရင်း အမေ့ကို ပြောခဲ့ဖူးသော စကားတစ်ခွန်းကို အမှတ်ရမိသည်။ အသက်အရွယ်ကြီးလာလျှင် အမေ့ကို ကိုယ်နှင့်အတူနေဖို့ တောင်းဆိုသော စကားဖြစ်သည်။ အမေကတော့ ကိုယ်နှင့်နေလျှင် ပင်ပန်းမည်ဆို၍ မနေဖူးဟု ရယ်ကာမောကာ ပြန်ဖြေသည်။ ဆရာမကတော့ ပြောင်မြောက်သော ဟာသတစ်ခုကို ကြားလိုက်ရသလို ဟက်ဟက်ပက်ပက်ရယ်သည်။ ဘ၀တစ်ချို့သည် life in dining ဟုပဲ ဆိုရမည်။ ထိုကာလလေးအတွင်းက အချိန်တို့သည် ချိုမြခဲ့လွန်းသည်။
စကားချပ် - ၂ ။....။
အတွေးတွေကို ချရေးပြီးတော့ ထုံးစံအတိုင်း image လေးတစ်ခုကို လိုက်ရှာကြည့်မိသည်.။ google က ထွက်လာသော link တော်တော်များများနှင့် image များသည် စိတ်ကို သဟဇာတ မဖြစ်စေခဲ့။ နောက်ဆုံး Pulse ကို အလည်သွားရင်း Elenapaint ဆိုတဲ့သူ flicker မှာတင်ထားသော dinner time ဆိုသည့် ပုံကလေးကို သွားတွေ့မိသည်…။ မွန်းကြပ်နေတဲ့ အတွေးတစ်ချို့ လွတ်မြောက်သွားမိသလို..။ ဒီလိုပါပဲ….။ စိတ် ဆိုသည်ကလည်း မှန်းရခက်သား မဟုတ်လားလေ….။ ပုံထဲက အကောင်လေးက ကိုယ့်ထက်တောင် လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေသလို တွေးမိတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သနားသွားမိသည်။
The Heart of Home - 1
The Heart of Home - 2
Posted by ဂျွန်မိုးအိမ် Labels: Living_Life_Style
"မီးဖိုခန်းတစ်ခုသည် အိမ်တစ်အိမ်၏ အသည်းနှလုံးဖြစ်သည်"
"အတိအကျ အကောင်အထည် မဖော်နိုင်ခြင်းအတွက် ထိုစိတ်ကူးသည် စိတ်ကူးသက်သက်အဖြစ် သာသာ မဖြစ်ပဲ လက်တွေ့ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆုပြုခဲ့ပါတယ်။
Excellent post. Sometimes i wish to ownamodern kitchen and at the same time i love the one at my parents house where we shared love,care and passion more thanacouple of decades. Hope your dream will be accomplished one day.
> noblemoe - thanks နော်..။
> The Queen -
နွေးထွေးခဲ့ဖူးတဲ့နေရာလေးကို သတိရတတ်ကြတယ်လေ..။ ဒီလိုအချိန်တစ်ချို့က မဖျက်ဆီးခဲ့ပါပဲ ဝေးကွာခဲ့ကြတာပါပဲ...။ you too sis, may your dream will come true!